Information about the county elections in Somali (soomaali) - Elections
Warbixin doorashooyinka goboleedka 2022
Oikeusministeriö 11.11.2021 15.20
Dib u habaynta daryeelka bulshada iyo caafimaadka (SOTE reform) waxa ay dhaqan gali doontaa 1da Jannaayo 2023. Dib-u-habayntu waxay mas'uuliyadda abaabulka daryeelka bulshada iyo caafimaadka iyo adeegyada samatabbixinta degmooyinka waxaa loo wareejinaayaa 21 goobood oo deegaanka daryeelka ah. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Helsinki kama mid ahan deegaanyaashaan daryeelka ah laakiin wey ka warqabeysaa adeeggada sote iyo hawlaha samatabbixinta.
Meelaha samafalku waa hay'ado dadweyne oo ka baxsan degmooyinka iyo dawladda, kuwaas oo leh is-xukun dhulkooda. Meelaha samafalku waxay inta badan ku salaysan yihiin qaybsiga gobollada hadda jira. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira afar goobood oo samafal ah oo ku yaal gobolka Uusimaa.
Hay'adda ugu sareysa ee go'aan ka gaarista deegaanka cayrta waa golaha deegaanka ee ay soo doortaan dadka deegaanka. Xubnaha golaha deegaanka, sida xildibaanyaasha, waxaa lagu soo doortaa doorashooyinka gobollada.
Doorashada ugu horreysa ee gobollada ayaa la qaban doonaa maalinta Axadda ee Janaayo 23, 2022. Muddada xil-haynta golaha deegaanka ee la soo doortay waxey bilaabaneysaa horraanta March 2022 waxayna soconaysaa ilaa dhammaadka May 2025. Sanadka 2025 laga bilaabo, doorashooyinka gobollada waxaa la qaban doonaa isla wakhtiga doorashada dawladaha hoose.
Doorashooyinka gobollada waxaa ka codeyn karo oo isa soo sharrixikaro dadka qaangaarka ah oo Finland muwaadiniintooda ah. Dadka kale oo wadanka dhegan oo wadammada kale sharcigooda weyn heystaan, shuruudo gaar ah ey oga odeyn karaan doorashada gobollada.
Codbixinta qasab ma ahan wadanka Finland.
Magaalada Helsinki iyo gobolka Åland ka ma dhici doonto doorasho goboleed.
Codeyn – Yaa codeynkaro
Waxaad ka codayn kartaa doorashooyinka gobollada haddii aad tahay muwaadin Finland ama waddan kale oo Midowga Yurub ah, Iceland ama Norway oo aad buuxisay shuruudaha soo socda:
Waxaad buuxineysaa ugu dambeyn maalinta codeynta (23.1.2022) 18 sano.
Waxaad ku leedahay Finland guri degmo oo ka tirsan deegaanka samafalka 3.12.2021
Haddii aad tahay muwaadin waddan kale, waxaad ka codayn kartaa doorashooyinka gobollada haddii:
waxaad buuxineysaa ugudambeyn maalinta doorashada (23.1.2022) 18 sano
aad degan tahay degmo Finland ka tirsan ugu yaraan laba sano oo isku xigta ka hor 3.12.2021
Degmada waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo lagu salaynayo sharciga dawlada hoose. Caadiyan degmada gurigu waa degmada aad ku nooshahay.
Degmada aad degan tahay ayaa sidoo kale go'aamineysa deegaanka aad ka tirsan tahay, tusaale ahaan deegaanka aad xaq u leedahay inaad ka codeyso. Doorashada gobolka, waxaad u dooran kartaa oo kaliya musharax ka soo jeeda deegaankaaga daryeelka.
Doorashada gobolka ee 2022, degmadaada ayaa go'aamin doonta degmada oo ku jirto nidaamka macluumaadka dadweynaha ee degmadaada December 3, 2021 saacadu markay tahay 24:00.
Degmadaada waxaad ka hubin kartaa Digi- ja väestötietovirasto.
Ogeysiiska xuquuqda cod bixinta ayaa loo diri doonaa dhammaan codbixiyayaasha xaqa u leh
Xafiiska Warfaafinta Dijital ah iyo Dadweynaha waxa uu hayaa diiwaanka xuquuqda cod bixinta, kaas oo koobaaya macluumaadka dhammaan kuwa xaqa u leh inay codeeyaan. Looma baahna in si gaar ah loo diiwaangaliyo diiwaanka xuquuqda cod bixinta.
Wakaaladda Macluumaadka Dijitalka ah iyo Dadweynaha waxay soo diri doontaa ogeysiis ku saabsan xuquuqda cod bixinta ugu dambayn 30ka Diseembar 2021, tusaale ahaan kaadhka ogeysiiska qof kasta oo xaq u leh inuu codeeyo cinwaankiisa la yaqaan. Waxaad ku heli doontaa kaadhka ogeysiinta si elektaroonig ah haddii aad soo bandhigtay adeegga isgaarsiinta elegtarooniga ah ee ay bixiso Wakaaladda Macluumaadka Dijital iyo Dadweynaha, ie fariimaha Suomi.fi (macluumaad dheeraad ah, booqo www.suomi.fi/viestit). Warqada cod bixinta waxaa ku jira tilmaamo ku saabsan sida loo codeynayo, warbixin ku saabsan halka laga codeynayo maalinta doorashada, warbixin ku saabsan shaqooyinka golaha deegaanka, iyo liiska goobaha codbixinta ee u dhow goobta aad degan tahay. Waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad keento warqadda codbixinta goobta codbixinta, caddaynta aqoonsiga ayaa kugu filan.
U qalmitaanka – yaa loo ogolyahey in uu codeeyo
Waxaad xaq u leedahay in aad isu soo sharaxdo doorasho, yacnii waxa aad isu soo taagi kartaa musharraxa doorashada gobolka ee deegaankaaga daryeelka haddii aad buuxiso shuruudahan soo socda:
Degmada aad ka soo jeedo waxay ka tirsan tahay deegaanka cayrta ee aad damacsan tahay inaad ka sharaxdo golahaaga
Waxaad xaq u leedahay in aad ka codayso aagga daryeelka
Go'aan maxkamadeed laguguma dhawaaqin inaad tahay qof itaal darnaaday.
Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah masuuliyiinta dawladda ee ku qoran xeerka deegaanka iyo madaxda sare iyo shaqaalaha deegaanka ayaan u qalmin doorashada gobollada.
Magacaabidda musharixiinta doorashada gobollada
Doorashooyinka gobollada waxay soo magacaabi karaan murashaxiin
Xisbiyada diiwaan gashan
Kuwa xaqa u leh inay codeeyaan ee samaystay urur-doorasho.
Axsaabtu waxay go’aan ka gaadhaan musharaxiintooda si waafaqsan xeerarkooda. Haddii aad doonayso inaad noqoto murashax xisbi, waa inaad ku heshiiyaan xisbiga.
Ugu yaraan 50 qof oo xaqa u leh oo deggan aagga daryeelka ayaa looga baahan yahay inay abuuraan urur doorasho.
Laba xisbi ama ka badan ayaa xaq u leh inay samaystaan isbahaysi doorasho. Laba urur ama in ka badan ayaa xaq u leh inay samaystaan liis wadaag ah.
Xisbi, urur-doorasho ama liiska wada-jirku waxa laga yaabaa in musharrixiinta deegaanka daryeelka aanay ka badnayn 1.25 jeer tirada ergada la doortay. Iyada oo lagu saleynayo tirada dadka deegaanka daryeelka, 59-79 ergo ayaa loo doortay goleyaasha.
Musharax kastaa wuxuu leeyahay lambar u gaar ah. Liiska musharixiinta ayaa lagu qoray warqad, taasoo ay u kala horreeyaan musharraxiinta, taasoo ka billaabanaysa lambarka 2. Marka la isku daro, musharraxiinta waxaa loo kala saarayaa liiska xisbiyada iyo liiska wadajirka ah. Murashax kasta, isku-darka wuxuu ka kooban yahay macluumaadka soo socda: magaca, lambarka musharaxa iyo qiimaha / shaqada / jagada, iyo degmada uu deggan yahay. Intaa waxaa dheer, isku-darka liisaska musharraxiinta ayaa muujinaya
Xisbiyada oo samaystay isbahaysi doorasho
kuwaas oo ururada doorashadu sameeyeen liis wadaag ah
Xisbiyada aan xubin ka ahayn isbahaysiga doorashada
Waa kuwee musharaxiinta ka baxsan liiska wadajirka ah.
Isku darka liisaska musharraxiinta waxaa lagu diyaarin doonaa dhammaan aagagga samafalka 23.12.2021. Isku darka goobtaada daryeelka waxaad ka arki kartaa, tusaale ahaan, goobaha codbixinta iyo boggaga doorashada ee Wasaaradda Cadaaladda (www.vaalit.fi). Haddii aad hore uga codayso meel ka baxsan aaggaaga daryeelka, waxaad sarkaalka doorashada waydiisan kartaa liiska magacaabista oo ay ku qoran yihiin musharrixiinta dhammaan aagagga samafalka.
Waxaad codayn kartaa midkood maalinta doorashada ee Axada 23 Janaayo 2022 ama ka hor maalinta doorashada inta lagu jiro codbixinta hore. Hal mar oo kaliya ayaad codayn kartaa. Waxaa jira ciqaabo haddii la codeeyo laba jeer Xeerka Ciqaabta.
Codbixinta horudhac ahi waxay bilaabmi doontaa Arbacada, Janaayo 12, 2022.
Codbixinta horudhac ahi waxay dhammaan doontaa dalka dibaddiisa Sabtida 15ka Janaayo 2022 iyo Finland Talaadada 18 Janaayo 2022. Qaar ka mid ah goobaha codbixinta ee hordhaca ah, wakhtiga codbixintu waa ka gaaban yahay.
Waxaad ka hor codayn kartaa goob kasta oo hore codbixineed oo ku taal gudaha ama dibadda. Goobaha codbixinta hore waa
Finland, goobaha cod bixinta ee ay degmadu u qoondeeyeen, sida wakaaladaha degmadu
dhowr safaarat oo Finland ey leedahey
machadyada sida isbitaallada, waaxyaha daryeelka bulshada iyo xabsiyada. Kaliya dadka la daweeyay ama la seexiyay machadyada ayaa ka codayn kara xarumaha.
Maraakiibta Finnishka ah ee dibadda ku sugan xilliga codbixinta hore. Shaqaalaha markabka oo keliya ayaa ku codayn kara markabka, rakaabkuna ma codayn karaan dushiisa.
Codee maalinta doorashada
Codbixinta Maalinta Doorashada waa Axad, Janaayo 23, 2022 laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
Maalinta doorashada, waxa kaliya oo aad ka codayn kartaa goobta codbixinta ee lagu tilmaamay warqadda codbixinta ee laguu soo diray.
Haddii awoodaada dhaq-dhaqaaqa ama dhaq-dhaqaaqa ay xadidan tahay ilaa xad aadan gaari karin goobta cod bixinta dhib la'aan, waxaad ka codeyn kartaa guriga xiliga codeynta ka hor.
Waa inaad iska diiwaan gelisaa doorashada guriga ugu dambayn Talaadada, Janaayo 11, 2022, kahor 4 galabnimo. Daryeelaha ku nool hal guri ayaa laga yaabaa, shuruudo gaar ah, inuu isku mar codeeyo.
Haddii aad dibadda ku maqan tahay dhammaan codbixinta horudhac ah iyo maalinta doorashada, waxaad sidoo kale ka codeyn kartaa dibadda warqad.
Si aad ugu codayso boostada, waa inaad ka dalbataa agabka codaynta ee adeega isdiiwaangelinta ee Wasaaradda Caddaaladda ciwaan dibadda ah. Dalabka waxaa la soo daabici karaa ugu horrayn saddex bilood ka hor maalinta doorashada. Codbixiye ahaan, adiga ayaa mas'uul ka ah inaad dalbato warqadaha codbixinta waqti fiican si aad u hesho wakhti aad ku soo celiso baqshadda codbixinta guddiga doorashada dhexe ee degmadaada muddada xaddidan ee xeerka doorashada.
Saan ayaad u codeyneysaa
Codaynta hore iyo codaynta maalinta doorashada waa inay ka dhacdaa goobta codbixinta. Waxaad u codayn kartaa hal musharrax oo ku calaamadsan isku-darka liisaska murashaxiinta ee degaankaaga daryeelka.
U cadee aqoonsigaga sarkaalka doorashada, tus baasaboorkaaga, kaarka aqoonsiga, shatiga wadista ama dukumeenti kale oo la mid ah. Sarkaalka doorashada ayaa ku siin doona warqad codbixin.
Aad goobta codbixinta. Hal qof kaliya ayaa laga yaabaa in uu goobta codbixinta ku sugnaado markiiba.
Warqada codbixinta ku qor lambarka musharaxa aad ku codaynayso. Waxaad u codayn kartaa hal musharrax. Ku calaamadee lambarka musharraxa goobada ku taal warqadda cod bixinta. Wax kale ha gelin warqadda codbixinta. Laabi warqadda codbixinta si lambarka aad calaamadisay uu u ahaado gudaha laalaabka oo uusan u muuqan dibadda.
U qaado warqadda codbixinta oo la laalaaban sarkaalka doorashada. Karraaniga doorashada ayaa ku shaabadeynaya warqadda codbixinta.
Haddii aad codaynayso maalinta cod bixinta, ku rid warqadda codaynta ee shaabbadaysan sanduuqa codbixinta.Haddii aad hore u codayso, sarkaalka doorashadu waxa uu soo saari doonaa baqshad aad ku xidhi doonto warqadda codbixinta ee shaabadaysan.
Haddii awoodaada inaad ku calaamadiso nambarka musharraxa ee warqadda codbixinta ay si weyn u liidato, waxaa laga yaabaa inuu ku caawiyo cod bixinta kaaliye ama sarkaalka doorashada ee aad dooratay. Kaaliyaha waxaa laga yaabaa inuusan ahayn musharax doorashada ama qaraabada dhow ee musharaxa. Kaaliyaha waxaa ku waajib ah in uu ilaaliyo sirta doorashada, sida in uu qariyo xogta la helay xilliga codeynta.
Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan doorashada waxaa bixinaya guddiga dhexe ee doorashada degmada.
Su'aalaha ku saabsan xaqa loo leeyahay in qof ahaan loo codeeyo waxaa ka jawaaba Xafiiska Warfaafinta Dijital iyo Dadweynaha.
Macluumaadka xiriirka labada waxay ku jiraan Ogeysiiska Xuquuqda Codbixinta.
Cinwaanada iyo saacadaha ay furan yihiin goobaha codbixinta ee horudhaca ah, hab-raacyada dalbashada warqadda codaynta, macluumaadka murashaxiinta iyo macluumaadka kale ee ku saabsan doorashada waxaad ka heli kartaa boggaga doorashada ee Wasaaradda Cadaaladda ee www.vaalit.fi.
Xogta ku saabsan musharrixiinta u tartamaya doorashada gobollada waxaad ka heli kartaa boggaga doorashada ee Wasaaradda Cadaaladda wixii ka dambeeya 23ka Diseembar 2021 iyo macluumaadka ku saabsan goobaha cod bixinta ee ka dambeeya 5 Noofambar 2021.
Digi- ja väestötietovirasto 12.10.2021